40 HTML sy CSS endrika fisoratana anarana, fandoavam-bola ary maro hafa | Famoronana an-tserasera
Raha misy zavatra izay mahazatra matetika amin'ny karazana tranokala, dia ireo no fampiasa. Ireo endrika ampiasainay hamenoana ny mombamomba ny fifandraisana, ampidiro ny antsipirian'ny banky, midira amin'ny tamba-jotra sosialy na manao fikarohana tsotra toy ny fanaonay isan'andro ao amin'ny motera fikarohana Google.
Ka anio dia hasehoko anao Endrika 40 amin'ny CSS miainga amin'ny endrika fifandraisana, fisavana carte de crédit, logins, tsotra, famandrihana na fanamarinana aza. Andian-dahatsoratra endrika kanto sy kanto lehibe hanomezana an'io teboka manokana amin'ny tranonkalanao, na inona na inona lohahevitra.
1 Taratasy fifandraisana minimalista
2 Endrika minimalista
3 Taratasy fifandraisana antitra
4 Taratasy fifandraisana
5 Takelaka fifandraisana nitarina
6 Mifandraisa amin'ny Form UI
7 Fanapahana karatra fandoavam-bola
8 Volavola fisainana carte de crédit
9 UI carte de crédit
11 Karatra fandoavam-bola
12 Fandoavana carte de crédit
14 Fomba tsikelikely
15 Endrika mifangaro
16 Fomba tsikelikely
17 Dingana isan-kerinandro
18 Fomba fiasa Jquery maromaro
19 Endrika sary mihetsika UI
20 Fomba fananganana kaonty / fisoratana anarana
21 Asongadin'ny bibilava
22 Efijery fidirana
23 Famolavolana UI fidirana
24 Famoronana kaonty Login sy UI
25 Hadisoana manimba
26 Midira CSS HTML
27 Fomba fisoratana anarana maodely
29 Boaty sarimiaina
30 Sehatra fikarohana
31 Tsindrio ny saha fikarohana tsotra
32 Vokatry ny fampidirana lahatsoratra CSS
33 Fikarohana efijery feno
35 Tsy misy fanontaniana
36 Fomba fisoratana anarana popup
37 UI boaty famandrihana
38 Boaty fisoratana anarana CSS
39 Boaty famandrihana
40 Fomba fanamarinana EMOJI
Taratasy fifandraisana minimalista
iray hafa endrika kely indrindra, na dia CSS fotsiny aza no ho a endrika tsotra sy misy vokany be. Tsy manana ny sary mihetsika minimalista an'ny teo aloha, fa manatanteraka tsara ny tanjony.
Taratasy fifandraisana antitra
Taratasy fifandraisana antitra, famolavolana tena kanto. Mamaly ireo tranonkala ireo ho hita avy amin'ny finday, na dia tsy misy fanamarinana aza.
Este contact form manana sary mihetsika mahaliana izy: misy taratasy miforona. Tsotra, fa tena ilaina amin'ny loko maro.
Takelaka fifandraisana nitarina
Este endrika fifandraisana nitarina Faran'ny aloha ihany io ary manana ny fanamarinana miaraka amin'ny jQuery. Tsindrio ny bokotra mitsingevana ary hiseho miaraka amina sary mihetsika mavitrika ny endrika. Miavaka.
Mifandraisa amin'ny Form UI
Mifandraisa amin'ny Form UI endrika iray vita amin'ny HTML sy CSS izy io. Misongadina amin'ny maha-izy azy karatra fifandraisana tsotra izay azontsika nofenoina ka ny sahan-tsoratra ihany no miova rehefa kitihina izy io.
Fanapahana karatra fandoavam-bola
Volavola fisainana carte de crédit
CSS madio ho an'ny a fizahana fizahana ho an'ny carte de crédit miloko fisaka. Miloko sy tsotra be izay afaka milaza kalitao sy matihanina.
UI carte de crédit
React Checkout, vita amin'ny React.js, miavaka amin'ny ny sary eo amin'ny lafiny azontsika ampanjifaina miaraka amin'ny serivisy na vokatra amidinay amin'ny eCommerce anay.
Ity fizahana ity dia miavaka amin'ny mety hametrahana sary eo amin'ilay karatra. ny endrika tsotra sy mazava natao tamin'ny CSS3, HTML5 ary somary jQuery. Kalitao avo lenta ary tsy mitovy amin'ny sisa amin'ny fizahana amin'ity lisitra ity. Afaka misintona ianao eto fizahana karatra fandoavam-bola ity.
Fandoavana carte de crédit
Kanto fividianana karama tsy mitovy amin'ny hafa ary mifototra amin'ny carte de crédit hita eo ambony Ka eto ambany dia manana ny endriny iray manontolo izahay miaraka amin'ireo angon-drakitra samihafa tsy maintsy nofenoin'ilay mpanjifa mba handoavana ny vola amin'ny eCommerce.
Este endrika tsikelikely miavaka amin'ny famoronana. Hovalianao ireo fanontaniana mba hahafahanao miverina any amin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanatrehanao maso eo amin'ny efijery lalandava.
Fomba fiasa Jquery maromaro
Raha manana endrika lava be, ity dia mety amin'ny fizarana samihafa miaraka amin'ny bara fandrosoana manaitra. Miorina amin'ny jQuery sy CSS, miavaka amin'ny famolavolana azy sy ny hakantony lehibe izy.
Endrika sary mihetsika UI
Ny tetezamita an'io sary mihetsika UI izy ireo mifototra amin'ny Domink Marskusic. Ny fiheverana ny vokatry ny famoronana ny boaty manga rehefa tsindrio ny sasany amin'ireo sahan-kazo roa fidirana na fotoam-pivoriana.
Fomba fananganana kaonty / fisoratana anarana
Asongadin'ny bibilava dia iray amin'ireo fidirana manaitra indrindra amin'ny lisitra rehetra izay miavaka amin'ny sary mihetsika kanto izay mipoitra haingana raha vao mikitika ny iray amin'ireo saha roa isika.
Masina ity famolavolana ity efijery fidirana toy izany koa ny azy ireo sary mihetsika sy ny famoronana azy. Raha te ho ianao no be mpampiasa indrindra momba ny famolavolana tranonkala dia tsy tokony hanjavona ity takelaka ity. Tena ilaina.
Famolavolana UI fidirana
Namboarina tamin'ny fampiasana HTML, Sass, ary jQuery. Famolavolana UI fidirana es elegant sy mazava momba ilay lohahevitra izay tsy misy sarimiaina miafina mba ho lasa iray amin'ireo tianao indrindra ao amin'ilay lisitra.
Famoronana kaonty Login sy UI
Hadisoana manimba Midira tsara izany noho ny sarimiaina saha miaraka amin'ny obnoxious.css. Original mba ho mahafinaritra, tsy miraharaha ary tena samy hafa fidirana. Original tsy misy fisalasalana ho an'ny tranonkalantsika.
Midira CSS HTML
Fandraisana Login mahaliana ny sary masina izay mampiseho ny saha tsirairay hitondrana ny mpitsidika na aiza na aiza no tadiavinay. Misongadina ihany koa ireo alokaloka voafidy amin'ny loko. Tsy misy sary mihetsika. Natao tamin'ny HTML sy CSS hanatanterahana izany amin'ny tranokala ho an'ny mpanjifa na antsika manokana.
Fomba fisoratana anarana maodely
Este Fomba fisoratana anarana maodely dia entanin'ny aingam-panahin'ny famolavolana fantatra amin'ny Design Material. Hitanay izany tamin'ny fampiharana marobe tamin'ny finday. Ao amin'ity kaody ity dia manana tontonana fidirana sy tontonana fisoratana anarana izay afenina tsy misy hatak'andro. Ny tontonana fisoratana anarana dia azo alefa amin'ny fipihana eo amin'ny tsanganana manga eo amin'ny ilany ankavanana. Izy io dia manana sary mihetsika mahafinaritra ho fidirana manokana sy manaitra.
Atombohy miaraka amin'izany ny takelaka fikarohana teny mifototra amin'ny flexbox. Misongadina amin'ny loko mena amin'ny «karoka» ary kely kokoa ho an'ny sehatry ny fikarohana mahafinaritra ho an'ny tranonkalanao.
Una tsipika lehibe mihazakazaka manerana ny efijery ka rehefa manindry azy isika dia manomboka manoratra ny fikarohana. Bokotra pikarohana hamaritana an'io endrika fikarohana tsotra.
Tsindrio ny saha fikarohana tsotra
Tsindrio ny saha fikarohana tsotra dia mifototra amin'ny fifandraisana hita ao amin'ny ny App Waze Driver Community vehicular. Ny kisary sy sary rehetra dia vita amin'ny CSS. Misongadina amin'ireo sary masina ireo izay mamela antsika hanao fikarohana manokana momba ny vokatra na serivisy. Manaitra noho ny hatsiaka.
Vokatry ny fampidirana lahatsoratra CSS
Vokatry ny fampidirana lahatsoratra CSS dia ahitana andiana sary mihetsika amin'ny vatasarihana soratra sy fikarohana ho mpikatsaka tsara amin'ny endrika.
Fikarohana efijery feno
Ity fidirana avy amin'ny fitadiavana efijery feno miasa amin'ny karazana lamina na toerana misy azy io. Mitaky fomba singa manokana sy fitadiavana-overlay ho hita ao amin'ny faka. Mampiavaka azy ny sary mihetsika mipoitra rehefa manindry ny bokotra fikarohana isika.
Un fikarohana endrika tsotra izany tiany ny milalao amin'ireo toerana samihafa sy ny sarimiaina. Tsindrio ny bokotra fitadiavana ary toa manoratra ireo teny ireo ny vatasarihana feno. Tena amin'izao fotoana izao ary tena atoro anao ho amin'ny fomba tsotra.
Tsy misy fanontaniana es endrika tsotra miaraka amin'ny sahan-dahatsoratra ary ny safidy hisafidianana valiny sasany ho safidin'ny mpampiasa azy ireo. Fifampiraharahana tsara ho iray amin'ireo tsara indrindra.
Fomba fisoratana anarana popup
Miaraka amin'izany endrika fisoratana anarana tampoka, tsindrio ny bokotra mitsingevana ary hitondra anay endrika miaraka amina tononkalo tena mahatsikaiky ary saha iray izay hametrahana ny mailaka. Tonga lafatra amin'ny marketing amin'ny mailaka.
UI boaty famandrihana
Una boaty famandrihana miaraka amin'ny lakolosy fanairana sy kely noho ny loko fisaka Amin'ny famolavolana.
Boaty fisoratana anarana CSS
Una boaty famandrihana marani-tsaina noho ny zava-misy mampiasa gradients ho an'ny bokotra famandrihana toy ny volomparasy an-tsaha.
Una boaty famandrihana tsotra fa misy vokany lehibe amin'ny famolavolana.
Fomba fanamarinana EMOJI
Amin'ny madio CSS ity endrika fanamarinana mamorona lakile na teny miafina. Rehefa manoratra izahay, ny emoji dia handrefy ny haavon'ny fiarovana ny endrika. Mampihomehy sy liana tsy misy isalasalana.
Aza adino ity lisitr'ireo zana-tsipìka mihetsika 23 ao amin'ny CSS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » Endrika CSS 40 izay mety tsy ho hita amin'ny tranokala rehetra
Juan Jose Perez dia hoy izy:
Ohatra tsara dia tsara naseho eto. Ny karazany sy ny fampifanarahana amin'ny toe-javatra samihafa ary ny zavatra tsara indrindra dia ny fampifandraisan'ny lohateny tsirairay dia misy ny demo sy ny kaody loharano na dia tokony asongadinao amin'ny bokotra «Jereo ny demo» aza satria noho ny fahalianana no nahitako azy tao amin'ny lohateny . Misaotra tamin'ny fandraisana anjara. Fiarahabana avy any Caracas.
Valiny tamin'i Juan Jose Perez
Zavakanto eny an-dalambe: rehefa miampita rindrina ny masony